Fahasahiranan'ny orinasa tsy miankina :: Olona iray hetsy nampiatoana tampoka tamin’ny asany • AoRaha
Tsy nitsaha-mitombo ny fahaverezana asa hatramin’ny nanombohan’ny fepetra fihibohana tamin’ny faritra maro teto Madagasikara. Efa mananika ny iray hetsy, amin’izao fotoana izao, ny isan’ny mpiasa naato ara-teknika tamina orinasa tsy miankina manerana ny Nosy.
Na izany aza anefa dia miezaka manodina ny orinasany, araka izay fahafahana eo am-pelatanany ireo orinasa tsy miankina mba tsy ho tonga any amin’ny fikatonana tanteraka.
« Saika niditra tamin’ny fampiatoana ara-teknika ny mpiasa sasany ny ankamaroan’ny orinasa tsy miankina. Eo amin’ny iray hetsy amin’izao isika miteny izao ny mpiasa najanona. Tsy azo atao mihitsy ny mampidina ny karaman’ny mpiasa. Rehefa tsy misy ny asa dia miditra amin’ny fampiatoana ara-teknika, ka tsy mandray karama ny mpiasa », hoy Rajaona Thierry, filohan’ny Vondron’ny mpandraharaha mpitantana orinasa eto Madagasikara na GEM.
Fanesorana tanteraka Notsindriany fa : « rehefa dify ny fe-potoanan’ilay fampiatoana ara-teknika dia ajanona tanteraka ilay mpiasa». « Misy dinika amin’ ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao fa azo atao ny manalava ny fampiatoana ara-teknika mihoatra ny dimy volana, araka ny lalàna mba hahafahana mitazona ny mpiasa », hoy hatrany ny fanazavana.
Nilaza kosa Razakaboana Hanitra, talem-paritra amin’ny fitsirihana asa eto Analamanga fa samy nanana ny fepetra noraisina ireo orinasa tsy miankina. Tao no nanakatona tanteraka ny orinasa, nampiato mpiasa tanteraka, fampiatoana ara-teknika ary fampihenana karama.
« Ireo orinasa madinika sy salantsalany, toy ny tsena ary ny orinasa misehatra eo amin’ny fizahantany no tena tafiditra tao amin’ny fanakatonana ny orinasany », araka ny fanampim-panazavana.
Nahafapo an’ireo mpandraharaha avy ao amin’ny GEM kosa ny fanitarina ny ora fiasana, izay nangatahan’izy ireo tamin’ny iray volana lasa. Efa miezaka amin’ny fitaterana an’ireo mpiasa kosa ny orinasa tsirairay noho ny tsy mbola niverenan’ny fiara fitateram-bahoaka.
Fivorian’ny mpanohitra :: Manomana fihetsiketsehana an-dalambe ny RMDM
Hetsika sosialim-bahoaka :: Hatomboka amin’ireo fokontany nahavita lisitra ny fizaràna vatsy tsinjo